Global Voices teny Malagasy » Mandray anjara amin’ny toekarenan’i Hong Kong ny vahiny mpiasa an-trano fa tsy manana ny servisy ara-bola fototra · Global Voices teny Malagasy » Print
Mandray anjara amin'ny toekarenan'i Hong Kong ny vahiny mpiasa an-trano fa tsy manana ny servisy ara-bola fototra
Voadika ny 12 Marsa 2019 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia nosoratan'i Jennifer Creery ary navoaka  tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 6 Marsa 2019. Ny endrika novaina indray navoaka indray tato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mandray anjara amin'ny 98,9 miliara $HK (US$12,6 miliara dolara amerikana) amin'ny toekarenan'ny tanàna ny vahiny mpiasa an-trano, ka mandrafitra hatramin'ny 3,9 isanjato amin'ny Harinkarem-Pirenena, araka ny fanadihadiana navoaka tamin'ny 5 marsa.
Na dia eo aza izany toe-javatra izany, nasehon'ny fanadihadiana ihany koa fa ny betsaka mpiasa an-trano no tafavoaka ivelan'ny toekarena anatiny – 18 isanjato ihany no manana kaonty amin'ny banky ary mitrosa be ny 85 isanjato. Ny tsy fahampiana fahalalàna fitantanam-bola sy ny fitsipika mifehy ny kaontin'ny banky nohita fa sakana lehibe amin'ny fahazoana servisy ara-pitantanambola.
Ireo sakana amin'ny fahazoana tolotra ara-pitantanam-bola
Mifangarika amin'ny tarehimarika ao Singapaoro (64,37 miliara $ HK) sy ao Malayzia (7,06 miliara $ HK) ny tarihimarik'i Hong Kong izay efa hita ao anaty fononteny avy ny fandraisan'ny mpifindramonina mpiasa an-trani eo amin'ny toekarena. Ao Singapaoro, 51 isanjato no manana kaonty amin'ny banky raha mitrokasa ny 34 isanjato. Ary ao Malayzia, 86 isanjato no manana kaonty amin'ny banky raha mitrosa ny 65 isanjato.
Ny tatitra mitondra ny lohateny hoe The Value of Care: Key Contributions of Migrant Domestic Workers to Economic Growth and Family Well-being in Asia, [Ny sandan'ny fikarakarana: ny fandraisana anjara ara-toekarena lehibe ataon'ny mpifindramonina miasa an-trano eo amin'ny fitomboana ara-toekarena s ny fanasoavana ny fianakaviana ao Azia] no voalohany nikajiana ny fandraisan'ny mpifindramonina miasa an-trano ao Hong Kong anjara ara-toekarena. Ny orinasam-panaovana tatitra fananam-bolan'ny mpanjifa antsoina hoe Experian no nampanao ny asa ary niaraha-natolotra tamin'ny FTMF=ONG Enrich ao an-toerana. Ny orinasam-pikarohana momba ny tsena antsoina hoe Frost & Sullivan ny nanao ny fikajiana araka ny sandan'ny asany (raha araka ny mari-pandrefesana ao an-toerana) sy ny fandaniana ataony ary ny fotoana malalaka ahafahany manatevin-daharana ny firaisankinam-behivavy ao an-toerana.
Araka ny tsikaritra, ny fandraisana anjara lehibe indrindra atolotry ny mpiasa an-trano ho an'ny toekarena ao an-toerana dia ny fikarakarana ny zaza — sandaina ho 40 $HK isan'ora izay andaniana eo ho eo amin'ny ho 3,85 ora isan'andro eo izany amin'ny ankapobeny. Mitotaly 184.970,52 $HK isa-taona izany.
369.651 ny isan'ny vahiny mpiasa an-trano niaina tao Hong Kong tamin'ny faran'ny taona 2017, ka vinavinaina ho 600.000 io tarehimarika  io amin'ny taona 2047 araka ny nolazain'ny governemanta. Hoy Lucinda Pike, tale mpanatanteraky ny Enrich:
Tsy hitan'ny olona sady tsy voasanda araka ny tokony ho izy asa an-trano izay mitontona any amin'ny vehivavy, ary any amin'ny mpifindramonina matetika. Faly izahay fa asehon'ity fikarohana ity ny otrika ara-toekarena sokafan'ny fisian'ny mpiasa an-trano.
Fiakaran'ny herin'ny mpiasa vehivavy
Araka ny fanadihadiana, mampitombo ny fidiram-bolan'ny isa-tokantrano ho roa sosona ny fampiasana mpiasa an-trano amin'ny alalan'ny fahafahan'ny vehivavy ao an-toerana miditra ao amin'ny sehatry ny asa. Ny 49 isanjato monja amin'ny vehivavin'i Hong Kong manomboka amin'ny 25 ka hatramin'ny 52 taona, manan-janaka, no niasa raha tsy manana mpiasa an-trano ry zareo. Mitombo ho 78 isanjato izany rehefa manana mpiasa an-trano ry zareo.
Saingy lazain'ny mpitsikera fa na dia eo aza ny fandraisana anjaran'ny mpiasa an-trano amin'ny toekarena anatiny, dia mbola miatraika fanavakavahana hatrany ry zareo. Sringatin, filohan'ny sendikan'ny mpiasa mpifindramonina Indoneziana niteny tamin'ny Hong Kong Free Press hoe:
Ny olana dia ny tsi-fankatoavan'ny governemantan'i Hong Kong ny mpiasa mpifindramonina ho ao anatin'ny vondron'ny tontolon'ny asa ao Hong Kong… Heverina ho toy ny vahiny izahay, sokajin'ny mpiasa ambany nefa dia ny governemanta no nanosika ny politika sy ny fampiharana manoka-monina ny vahiny mpiasa tsy ho tafaraka amin'ny vahoakan'i Hong Kong iray manontolo.
Izay no lazainay hoe fomban'ny fanandevozana maoderina. Ary dia hamafisin'ny governemantan'i Hong Kong amin'ny alalan'ny politika (fanaovan-dalàna) sy ny fitsipika izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/12/135972/